Mpanamboatra medikaly - Orinasa mpamatsy medikaly any Sina
Telefaona: + 86-0755-2826 9320
FAMONJENA FITSIPIKA KELY
INDRINDRA ny fametahana sy ny fametahana
Fametahana LSR & RUBBER
LSR & fingotra
Famokarana LSR & Rubber
Varotra vokatra vita
Ireo singa milina kafe
Mpampitohy 34 sy 4 pin
Fitaovana fandrefesana mari-pana
Miaraka amin'ny ampahany amin'ny takelaka PCBA
Tube fantsom-pahasalamana fanampiana trotraka
✭ Ny orinasanay dia tena za-draharaha amin'ny sehatry ny lasitra plastika ho an'ny catheters ara-pitsaboana. Tsy ny famokarana bobongolo ihany, fa ny famolavolana tsindrona ambaratonga ara-pitsaboana ihany koa. Ny fitaovana plastika ampiasaina amin'ity catheter ara-pitsaboana ity dia tena lafo ary mitaky bobongolo tena avo lenta. Ny lavaka anatiny amin'ny vokatra dia 1,27mm ihany ny savaivony. Ny sisin-tsolika ataontsika dia vita amin'ny akora avo lenta SKH51. Ity fitaovana ity dia afaka miantoka ny fandeferana amin'ireo lavaka kely ary miantoka ny ain'ny serivisin'ny tsofin-tsofina.
✭ Ny fitaovana plastika an'ity catheter ity dia fitaovana malefaka 65 degre. Mandritra ny dingan'ny famolavolana tsindrona dia sarotra ny manala azy. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana teknolojia anay, milamina ny famokarana lasitra misy antsika ankehitriny ary nohafohezina ny tsingerin'ny tsindrona. Amin'izao fotoana izao, ny tsingerin'ny famolahana tsindrona dia 16 segondra, izay mitsitsy ny fotoana andefasana ny mpanjifa.
✭ Ny andiana lasitra dia vita amin'ny S136 nohamafisina fitaovana, ary ny ain'ny lasitra tokony hahatratra in-1 tapitrisa. Amin'ny dingam-pamokarana famolavolana tsindrona dia ilaina ny miantoka ny fahamarinan'ny vokatra ary miantoka fa milamina sy mafy orina mandritra ny fizotran'ny fivoriambe.
✭ Raha manana vokatra mitovy amin'izany ianao, azafady Aza misalasala mifandray aminay. Ho mpiara-miasa aminao indrindra izahay.
Boaty plastika 7andro
✭ 7 andro * boaty fitahirizana 7 fitahirizana boaty 49 fanafody-porofon'ireo fanafody tsirairay dia afaka mamaly tanteraka ny filanao isan'andro na dia mandeha aza.Ny lokon'ny avana isan'andro dia voamarika misaraka amin'ny sarony mba hahafahanao manavaka mora izay tianao.Ny sarony plastika misy sakafo matanjaka sy maharitra dia hijanona ho mafy raha mbola manakatona azy ianao ary tsy misokatra intsony. Tsy misy fanafody miparitaka amin'ny lozam-pifamoivoizana na ny fiantraikany.Ny famolavolana fisehoana varingarina tsy manam-paharoa dia mamonjy habaka, tsy toy ny boaty pilina boribory boribory hafa mahitsizoro, izay mahazaka fitaovana kely vitsivitsy.
✭ Ohatra, Pill CUTTER.Size 22.5 x 6 X 27 cm Ny boaty kely tsirairay dia misy refy 1.06 santimetatra * 0.23 santimetatra * 0.86 cm, ampy habe amin'ny habe samihafa
Ity ampahany plastika ity dia ampahany amin'ny solika fanivanana solika avy amin'ny mpanjifa USA. Ity andiana bobongolo ity dia mandray ny fenitra DME. Ny akora fototra dia vy vy S136.
✭ Ny firafitry ny bobongolo dia tsotra ihany, miaraka amina rafitra roa mampiditra inser Becu. Ny vokatra dia PP, ary ny polony dia tokony ho poloney- # 600. Ny fepetra takiana amin'ny haben'ny vokatra dia +/- 0,1. Ny ora fanaterana bobongolo dia 35 andro, ary ny tsindrona tsindrona dia 35 segondra. Ny bobongolo dia nosedraina indroa fotsiny, ary nangataka anay ny mpanjifa handamina fanondranana any amin'ny ozinina fanaovana tsindrona USA.
✭ Rehefa manamboatra ampahany vita amin'ny tsindrona avy amin'ny plastika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny ampahany sy ny fotoana tsingerina ny mari-pana. Ny fifehezana ny mari-pana optimum mandritra ny fanodinana thermoplastics noho izany dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny famokarana ihany koa.
✭ Ny lasitra fanindronana dia hafanain'ny bisikileta avy amin'ny fitaovana voatsindrona. Ny hafanana dia esorina amin'ny alàlan'ny fanodinana hafanana amin'ny fitaovana sy ny vy amin'ny bobongolo mankany ambonin'ny fantson'ny fifehezana ny mari-pana, izay omena ny hafanana amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana mankany amin'ny mpanelanelana famindrana hafanana (rano na solika). Ny singa fanaraha-maso ny mari-pana dia manaparitaka ny hafanan'ny fampitaovana famindrana hafanana ary mamerina ilay mpanelanelana nangatsiaka tamin'ny fivezivezena.
✭ Ny andiana lasitra dia vita amin'ny S136 nohamafisina fitaovana, ary ny ain'ny lasitra tokony hahatratra in-1 tapitrisa. Amin'ny dingam-pamokarana famolavolana tsindrona dia ilaina ny miantoka ny fahamarinan'ny vokatra ary miantoka fa milamina sy mafy orina mandritra ny fizotran'ny fivoriambe. Ataovy milamina kokoa ny ampahany elektronika anay.
Biraon'ny ShenZhen: No. 1113, Hengping Dong Road, Yuanshan Street, Distrikan'i Longgang, Kota Shenzhen, Faritanin'i Guangdong, Sina.
Fanavaozana ny vokatra manoloana ny COVID-19
COVID-19 Na dia mahatsiravina aza, fotoanan'ny krizy ...
Ireo mpanamboatra lasitra dia mifantoka amin'ny fitadiavana ny manaraka ...
Toy ny varotra indostrialy maro hafa ...
Fampiharana bobongolo vita amin'ny silika azo avy amin'ny rano
Ny gel silicaika ranoka dia nohafohezina ho LSR, ...